News - Evonik: Acqusition na Chinese 3D onye na-ebi akwụkwọ ọkachamara UnionTech - Ngwa ọhụrụ maka arụmọrụ respopolymer na-elekwasị anya
Ngwá ụlọ akpụzi
Na-asa ákwà nkata akpụzi
Evonik: Nkwado na ọkachamara 3D ibi akwụkwọ nke China UnionTech - Ngwa ọhụrụ maka arụmọrụ respopolymer na-elekwasị anya
Evonik enwetala osisi pere mpe na ụlọ ọrụ China Union Union site na ya Venture Capital unit. Companylọ ọrụ ụlọ ọrụ Shanghai na-arụsi ọrụ ike n'ọhịa nke mbipụta stereolithography 3D. Ngwunye teknụzụ mgbakwunye a na - eme ka o kwe omume, iji mepụta akụkụ polymer ziri ezi nke ọma. Bernhard Mohr, onye isi ngalaba Venture Capital kwuru, sị: “Anyị na-atụ anya ka nnukwu ọrụ aka na ngalaba stereolithography. Evonik na-akwadebe mwepụta nke ihe eji eji maka usoro a. Ya mere, ego anyi etinyeghi na nloghachi ego bara uru, mana karia ihe nile banyere nghota ohuru banyere usoro a. Evonik na-atụ anya inweta ohere inweta ahịa maka ngwa ahịa fotopolymer ọhụrụ, ọkachasị n'ahịa ndị China na - eto n'ike n'ike, Mohr gara n'ihu.
Na usoro stereolithography, a na-adọta akụkụ ahụ site na bat nke mmiri resin na-acha ọkụ. Laser ma ọ bụ ihe ngosi ọkụ na-egosipụta ihe mkpuchi fotopolymer site na oyi akwa, na-ebute ngwaahịa atọ. Site na usoro a, enwere ike ịmepụta mmepụta ihe dị mgbagwoju anya, nke nwere usoro dị nro ma sie ike karịa usoro 3D ndị ọzọ. Ahịa ndị a na-ahụkarị gụnyere ụgbọ ala na ndị na-emepụta ụgbọelu yana akụkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ pụrụ iche.
Thomas Grosse-Puppendahl, onye isi nke Ugbo Oru Manufacturing Innovation Growth Field na Evonik, na-ahụ itinye ego ahụ dịka ezigbo mgbakwunye na pọtụfoliyo dị. Evonik na-akwadebe iwebata usoro nke usoro ọhụụ maka ahịa dị ka mmalite nke ngwaahịa ngwaahịa INFINAM® ọhụrụ. "Site na mmalite nke ngwaahịa ọhụrụ na ntinye aka ugbu a na UnionTech, anyị na-agbasawanye ọrụ anyị dị ka onye ọrụ ntụkwasị obi nke ụlọ ọrụ na mmepe na nrụpụta nke ihe arụmọrụ dị elu maka mbipụta 3D iji mee ka ọrụ azụmahịa anyị sikwuo ike teepu fotopolymer, ”ka Thomas Grosse-Puppendahl na-ekwu. Na mgbakwunye na pọtụfoliyo polymer maka usoro ntụ ntụ na filamentị nke biomaterial maka teknụzụ ọgwụ, Evonik ga-enye ọtụtụ ihe eji ejikere maka ihe eji arụ ọrụ maka teknụzụ dabere na fotopolymer iji nwekwuo ike gbasaa ihu ala ihe niile nke 3D mbipụta akwụkwọ , dị ka Grosse-Puppendahl si kwuo.
Evonik etinyela ego na ọtụtụ ụlọ ọrụ na ngalaba nke mgbakwunye mgbakwunye iji kwado mmepe nke ụlọ ọrụ a. The UnionTech ulo oru mbo zuru oke ka Evonik si ẹdude Pọtụfoliyo nke 3D-ebi akwụkwọ na-eme na bụ nke abụọ 3D ulo oru mbo ke China.
A na-ahụta UnionTech dị ka onye ndu ahịa na Asia maka ndị na-ebi akwụkwọ nrụpụta nnukwu. Companylọ ọrụ ahụ na-etolite ma na-arụpụta ndị na-ebi akwụkwọ, na-ebunye ihe obibi akwụkwọ site na ndị enyemaka ma na-enye mgbakwunye mgbakwunye dị ka ndị na-eweta ọrụ. Nke a na-enye ụlọ ọrụ nyocha zuru oke nke ngwa 3D. UnionTech hiwere na afọ 2000 ma nwee ihe dị ka ndị ọrụ 190. Jinsong Ma, onye isi njikwa nke UnionTech, na-anabatakwa nsonye nke ụlọ ọrụ kemịkalụ ọkachamara site na echiche dị mkpa: “Evonik na-ewepụta ihe maka usoro mbipụta 3D nkịtị niile. Nke a mere ka ụlọ ọrụ bụrụ ezigbo onye ọlụ iji soro anyị too. Nke a na-enye anyị ohere ịnweta ihe ndị anyị chọrọ maka ndị ahịa anyị. ”
UnionTech nwere ọtụtụ ndị na-etinye ego na China yana njikwa ụlọ ọrụ ahụ. E kwetara ka ha ghara igosipụta ego nke ego ahụ.
Post oge: Dec-25-2020